/ Products / vamwe / Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1
SKU: 745-65-3. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweAlprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3), pasi pemirairidzo yeCGMP uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
Prostaglandin E1 (PGE1), inozivikanwawo se alprostadil, inowanzoitika prostaglandin inoshandiswa semishonga. Mumucheche ane utachiona hwemwoyo, hunoshandiswa nekudzivirira kwepfupi mukati mutsva kuzarura ductus arteriosus kusvikira chirwere chinogona kuitwa. Nokujowa mupenisi kana kuiswa mu urethra, inoshandiswa kurapa erectile dysfunction.
Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3) kushandiswa mu steroid cycle
Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (CAS 745-65-3), inonzi Avastin uye Mvasi.
Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 Kushandisa
Inofanira kutora maminitsi e90 kuti iwe ugamuchire mukana wako wekutanga we bevacizumab. Chiremba kana mukoti achakuchengetedza zvakanyanya kuti aone kuti muviri wako unoita sei nevavacizumab. Kana usina matambudziko akakomba apo iwe unogamuchira mukana wako wekutanga webevacizumab, inowanzozotora 30 kumaminitsi e60 kuti iwe ugamuchire umwe neumwe wemirasi yako yakasara yemishonga.
Iyo Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3) mabasa
Nekurapa kweErectile Dysfunction (ED), alprostadil inodzokorora mitsipa yakashata ye corpus cavernosum; zvisinei, kunyatsoshandiswa kwechiito hakuzivikanwi. Zvinoratidzika kuti migumisiro yacho inokonzerwa nekuwedzera intracellular concentrations of cyclic AMP. Alprostadil inopindirana nehumwe membrane-bound receptors iyo inokurudzira adenylate cyclase uye inosimudzira intracellular cyclic AMP, inoita kuti kushandiswa kweprotein kinase uye kuguma kunonoka kwemaviri. Izvi zvinopesana ne papaverine iyo inhibits phosphorylation inokonzera kushandiswa kwekushandiswa kwe-cyclic AMP uye inopesana ne calcium mobilisation panguva yekushungurudzika kwemisungo. Alprostadil inogonawo kurwisa zviito zvevasoconstrictive zve norepinephrine nekudzivirira neuronal kusunungurwa kwe norepinephrine uye inogona kusimbisa zviito zve nonadrenergic, noncholinergic vasodilatory neurotransmitter. Mukurapa ED, alprostadil inokurudzira kukonzera nekuzorora kunetseka kwemafupa uye kushandura mabhetera emagetsi uye matavi awo. Kuwedzera kwema cavernosal arteri kunoperekedzwa nehuwandu hwekuwedzera kwekutsvaira kwevelocity uye kuwedzerwa kubuda kwemafuro ekubuda. Somugumisiro, maruva aya anowedzera uye ropa rinoputirwa rwechipiri kune kuwandisa kwemavhesi kurwisa tunica albuginea. Kuti uwane tumescence yakakwana uye kusagadzikana, tunica albuginea inofanira kunge yakaoma zvakasimba kuti ikwanise kuvhara mavhesi uye ichidzivisa kuputika kwevhuni. Izvi zvinoshandiswawo se "corporal veno-occlusive mechanism". Alprostadil haina kuchinja zvakananga ejaculation kana orgasm.
Muchirapa che ductus arteriosus-dependent chiremera chepfungwa chinokanganisa, alprostadil inochengetedza ductal patency kuburikidza nekudzikinura misoro inotapira ye ductus arteriosus. Alprostadil inoshanda chete kana ikapiwa musati wasvika pakuvhara zvakakwana kweatomic ye ductus arteriosus. Kutungamirirwa kwe alprostadil kune neonates ne cyanotic congenital heart defects (inogadziriswa mapirmonary blood flow) inokonzera kuwedzera kwepermonary blood flow uye / kana kuwedzera mukusanganiswa pakati pe systemic uye pulmonary circulation izvo zvinoita kuti kuwedzerwa kwenguva pfupi kubuda kweoksijeni kunokonzera kushanda (PaXXUMUM) uye oksijeni saturation. Mhinduro ye cyanotic neonate kune alprostadil therapy inopindirana zvakare nehuwandu hwehuwandu hwePXXUMUMX. Mhinduro huru kwazvo inoratidzika kunge iri mune zvinyorwa zvisinganzwisisiki PaO2 (<2 torr), kuderedza ductus arteriosus, uye ndeve mazuva 2 akare kana kuti vaduku. Neonates ne PaO20 tsika dze 4 torr kana zvakanyanya kazhinji hazvipinduri kune alprostadil.
Muchidimbu chekuchengetedzwa kwemagetsi ekuyerera kweropa, kutonga kwe alprostadil kunogona kukonzera kudzivirira kana kururamiswa kweAyememia, kuwedzerwa kwemwoyo kunokonzera nekuwedzera systemic yeropa, kuwedzerwa kwechikadzi kupisa kwemhepo, kuwedzerwa kwechirwere chekubuda ropa uye kushanda, kuderera kwemaitiro ekuderedza kukwira kweaortic ropa (inonates with coarctation of the aorta), uye / kana kuti kuderedza chiyero chemapuraneti arteri kukumanikidza kuburuka aortic (mukati neonates nekuputsana kweaortic arch). Kusiyana ne-cyanotic neonates, kushanda kwe alprostadil mu-acyanotic neonates hakurevi nemakore kana kutora maitiro PaO2.
Alprostadil (Prostglandin E1) inoshandiswa kurapa erectile dysfunction (ED) mune varume vakuru. Kubudirira kwe alprostadil mukurapa ED kunosiyana nechikonzero; mhinduro yekutaridzika inowanzopera muvarwere vane ED nekuda kwemashizha akavhenganiswa achienzaniswa neavo vane ED nekuda kweropagenic, psychogenic, kana kuti vasculogenic zvinokonzera. Mafomu maviri emadhora anoshambadzirwa pakurapa ED: chigadzirwa chetrutratethral (Muse) inoshandisa pirlet inoshandiswa inoshandiswa mu urethra uye jekiseni (Caverject kana Edex) iyo inopinda zvakananga mu corpus cavernosa. Mamwe maforha emurairo akadai setipikiti gel uye kwete-invasive liposomal delivery system iri pasi pekutsvakurudza. Maererano nemitemo yekurapa ED, muromo we phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5 inhibitor) inotorwa shanduro yekutanga. Chechipiri-line yekurapa nzira dzinosanganisira intracavernous injection uye intra-urethral therapy. Intracavernous injection therapy ndiyo inonyatsoshanda kurapwa kwechirwere cheEED, uye inofanirwa uye inochengetedzwa mhinduro. Zvisinei, inoparadza uye inotarisa zvinokonzerwa nemigumisiro yemigumisiro kusanganisira priapism uye penile fibrosis. FDA inobvumirana ndeyotevera: Caverject munaJuly 1995, MUSE muna October 1996, uye Edex muna June 1997.
Alprostadil nedzimwe prostaglandin munyaya dze E dzakangoerekana dziripo mu placenta uye ductus arteriosus ye fetus. Iyo E-type prostaglandins vasodilate arterioles nekuzorora zvakakwana kwevascular smooth muscle. Zvimwe zvinokonzerwa nehutachiona zvinosanganisira kuwedzera kwehutano hwemwoyo, kushandiswa kwemidziyo ye systemic uye yemapummoni, kuputika kwe ductus arteriosus, kuvharwa kweplatelet aggregation, kuregererwa kwemakumbo emaronda, kuwedzerwa kwehupenyu hwekubuda ropa, uye kunonoka kwechinguva chekutora nguva. Intravenous alprostadil inoshandiswa muononates nekudzivirira kwekurudyi kana kuruboshwe ventricular outflow kuchengetedza mararamiro e ductus arteriosus kusvikira nguva yekugadzirisa kana kupora chirwere. Alprostadil inowanzobudirira mune izvozvi zvisingabatsiri nechepachiviriro chekutengesa ropa PO2 uye ndeipi mazuva 4 akare kana kuti pasi. Mune hutano hwakwegura kupfuura mazuva e4, kune kuderera kwekudzikisa kwemafupa reactivity mushure mekugadziriswa kwemazuva mashure ekuberekwa kwepasvingo rwe ductus arteriosus. Intravenous alprostadil inoda kuporesa kutarisa panguva yekutungamira nokuti apnea inowanikwa mu 10-12% yevashandi. Alprostadil is FDA inobvumirwa nevarwere vevana vaduku sevana. Prostin VR Pediatric yakagamuchirwa neCDA mu 1981.
Nzira yekutenga Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 kubva kuAASraw